काठमाडौं महानगर पालिकाले जिप्रकालाई फुटपाथ पसल राख्न नदिन ध्यानाकर्षण गरायो ! - Subhay Postकाठमाडौं महानगर पालिकाले जिप्रकालाई फुटपाथ पसल राख्न नदिन ध्यानाकर्षण गरायो ! - Subhay Post
काठमाडौं महानगर पालिकाले जिप्रकालाई फुटपाथ पसल राख्न नदिन ध्यानाकर्षण गरायो !
काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ र ठेलागाडा व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गरेको छ। कामपाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले शुक्रबार काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाललाई भेटी सोबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
काठमाडौंमा निषेधाज्ञा खुकुलो गर्ने भन्दै कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढेको बेला काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यही भदौ २४ गते जारी गरेको आदेशको सञ्चालन गर्न सकिने क्रियाकलाप अन्तर्गत बुँदा १० मा ‘फुटपाथ पसल, ठेला व्यापार, स्टेशनरी पसल, इलेक्ट्रिक र इलेक्टोनिक्स पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर बिहान ११ बजेसम्म र बेलुकी ४ बजेदेखि ७ बजेसम्म खोल्न सकिने भनिएको छ।
काठमाडौं महानगर पालिकाले सो बुँदामा उल्लेख भएका व्यवसायमध्ये ‘फुटपाथ र ठेला व्यापार’ लाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने गरी पुनःआदेश जारी गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको हो।
यस सवालमा काठमाडौं महानगर पालिकाको वार्षिक नीति र कार्यक्रमबाट नै फुटपाथ पसल हटाउने निर्णय गरिसकेकाले अहिलेको आदेश महानगरको यो नीति विपरीत भएको उपमेयर खड्गीले बताए ।
” शहरमा सङ्क्रमण फैलिँदो दरमा छ, यसै पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ जटिल छ, यदि फुटपाथ पसल र ठेला व्यापार खोल्ने हो भने महामारी नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ’, उनले भने ।महानगर पालिकाले यस सवालमा स्थानीय सरकार भएको आधारमा आफैं पनि यसलाई निषेध गर्ने अधिकार राख्दछ । यसबारे महानगर पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । महानगर पालिकाले कोरोनाको जोखिम कम गर्न धेरै कार्य गर्नुपर्ने बाकी नैं छ ।